Doorashada Afhayeenka baarlamaanka oo goordhow ka dhacaysa Muqdisho. – Radio Daljir
Agoosto 28, 2012 4:52 b 0
Muqdisho Aug, 28 – Doorashada afhayeenka baarlamaanka dawlada Federalka Somalia ayaa goor dhow si rasmi ah uga bilaabanaysa xarunta Iskuul Buluusiya ee magaaladda Muqdisho.
Afhayeenka Baarlamaanka ayaa waxaa u ordaya musharaxiinta kala ah, Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaawi, C/rashiid M Xidig, Dr Cali Khaliif Galayr,? & Xasan Abshir Faarax,
Sidoo kale,? kuxiggeenada afhayeenka baarlamaanka ayaa waxaa u tartama ku dhowaad 20 musharax. Xildhibaannada cusub ee baarlamaanka ayaa xilligan ku qul-qulaya xarunta Iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho si ay u doortaan mudanaha baarlamaanka shir gudoomin doona 4-ta sano ee soo socota.
Doorashada afhayeenka Baarlamaanka ee maanta dhacaysa, ayaa ah mid aad indha loogu hayo taasoo ka xiisa badan tan Madaxweynaha ee soo socota, waxaana bulshadu aad ugu dhegtaagayaan natiijada doorashadda.
Labo Shariif iyo Gaas oo maanta Muqdisho kula kulmay Ergayga midawga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda.